ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်သွားခဲ့ရင်… ပြန်လျှောက်နည်း… ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ်…
June 26, 2019 Thuta Star 0
ယာဉ်ေ မာင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက်. သင်ကိုင်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ ဒီလိုလေးပြန်လျှောက် ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ပြန်ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်မူးရင်ရယ် မိတ္ထူရယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာရယ်ပဲလိုတာ အဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံရင် ကညနမှာပြန်လျှောက် ပြန်ရရော။ အဲ့ တစ် ခုေ တာ့ရှိတယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာဟာ မိမိရဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နံပါတ်ပြောပြနိုင်မှ […]
နေပြည်တော်မှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ….
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေပြည်တော် မူကြိုကျောင်းမှ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဂရုဏာဒေါသတွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါ။ တစ်လကျော်သွားတဲ့ထိ အမှုမှန် မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ ထိုအမှုအတွက် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လင်းလင်းက အခုလိုပဲ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုလာပါတယ်။ “အများစုစောင့်ကြည့်ချင်စရာအနေအထားနှင့် နေပြည်တော်က သက်ငယ်မုဒိန်းကိစ္စပါ ကာယကံရှင် သမီးလေးရဲ့အဖေဖြစ်သူနဲ့လဲ သေသေချာချာ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ […]
ထူးထူးခြားခြား အနုပညာအလုပ်တွေကို ပြန်တွဲလုပ်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်….
အနုပညာအလုပ်တွေကို ထူးထူးခြားခြား ပြန်တွဲလုပ်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့နှစ်ဦးကတော့ လတ်တလော ရိုက်ကူးရေးတစ်ခုမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ အတူလုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်လေးကိုတော့ မင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်က သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးကလည်း […]
မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာ ပြောလာတဲ့ ဇေရဲထက်….
မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာ ပြောလာတဲ့ ဇေရဲထက် လတ်တလော ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာတော့ တော်တော်များများ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ မောင်ကျော်ဇင်ဝင်းရဲ့ နာရေးမှာ အဖွားဖြစ်သူ နာကျင်ဝမ်းနည်းစွာ ငိုနေခဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး မင်းသားချော ဇေရဲထက်က ထပ်တူဝမ်းနည်းကြောင်းကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားဇေရဲထက်ကတော့ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေဆိုရင် သူ့အနေနဲ့တကယ် ကိုယ်ချင်းစာပြီး ကူညီပေးချင်တဲ့ စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ […]
ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ဒီနေရာ လက်ပံတန်းမြို့မှကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့မြို့နယ်အစ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ ၈၆ မိုင် ကနေ ၈၇/၈၈/၈၉ ၃မိုင်လောက်အကွာဝေး ချမ်းသာကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးကိုတွေ့ရင် ကားသမား/ဆိုင်ကယ်သမားများ အထူးသတိထား မောင်းနှင်ကြပါရန်လေးစားစွာသတိပေးပါရစေ။ လမ်းကိုကြည့်ပါ ဖြူးဖြောင့်ပြီးမျက်ကွယ်မရှိပါ။ သို့သော်အဲဒီလမ်းပိုင်းလေးမှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေ ဘဝပျက်ခဲ့ ရတဲ့မိသားစုတွေ မပြန်လမ်းမြန်းသွားခဲ့ရတဲ့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်တွေ ထောင်နန်းစံသွားရတဲ့ယဉ်မောင်းတွေ များခဲ့ရပြီ။ ပရိတ်လဲရွတ်မရ ကမ္မဝါလဲဖတ်မရ။ ပုံမှန်လို […]
ဘဏ်အကောင့်ထဲမှငွေများလက်သည်မပေါ်ပဲပျောက်သွားခြင်း မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ဖုန်းဘေဖြည့်ဖို့ Cb pay app ထဲလည်းဝင်လိုက်ရော ငွေတွေဖြတ်ထားတာ Transactions တွေအများကြီး။ စုစုပေါင်း သိန်းတစ်ရာပြည့်ဖ်ို့ ၂၀၀ ပဲလိုပါတယ်။ 9990,800 ကျပ်ပါ။ Transactions 14 ကြောင်းပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး ကတ်မြန်မြန်ပိတ်ခိုင်းဘဏ်သွား အကြိုးအကြောင်းပြော။ စိတ်မချလို့ကျန်တဲ့ သိန်းတစ်ရာထုတ်။ […]
“ကုတင်ပေါ်က ကိစ္စကိုပြောဖို့ ရှက်နေရင် ကိုယ့်ယောကျာ်း တခြားကုတင်ပေါ်ရောက်သွားမယ်” ဆိုတဲ့ လှနုထွန်း
National Director အလှမယ် လှနုထွန်းဟာဆိုရင် သူမက ခင်ပွန်းအပေါ်တာဝန်ကျေတဲ့ ဇနီးတစ်ဦးအဖြစ် သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဖော်ပြလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ဝေဖန်မှုများစွာခံနေရပြီး အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒဿန တွေကိုလည်း အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီး တွေအတွက် ဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူမက လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ” မိန်းမတွေ အတူမအိပ်ချင်တဲ့ ယောကျာ်း […]
ဂီတအကြောင်းတောင်မသိပဲ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဒိုင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်
ဂီတအကြောင်းတောင်မသိပဲ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဒိုင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေကြာ ကတ်ဆက်ခွေတွေ ခေတ်စားတဲ့အချိန်ကတည်းက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ တေးရေးတေးဆို ဆောင်းဦးလှိုင်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ရင်းရင်းနှီးနှီးကို သိထားကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလေးထားပြီး သေချာစေ့စေ့စပ်စပ်ကိုသိတဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်တယောက်ကတော့ သူရေးတဲ့သီချင်း သူဆိုတဲ့သီချင်းတွေကတော့ လက်ရှိချိန်ထိ […]
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပချင်သူတွေ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချချင်သူတွေအနေနဲ့ အစားအသောက် ဆင်ခြင်သင့်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း အစားလည်းလျော့ပါလျက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မကျသေးဘူးဆိုရင် အခုဖော်ပြသွားမယ့် အလေ့အကျင့်တွေထဲက ဘာတွေကို ကျူးလွန်မိနေလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပြီနော်။ ၁။ လုံလောက်သောအိပ်ချိန် မရှိခြင်း သင်က ညဘက်မှာလုံလောက်စွာ အိပ်စက်အနားယူခြင်းမရှိတဲ့အခါ […]
Myanmar Imperial University မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ဇင်ဝင်းရဲ့ နာရေးမြင်ကွင်းတချို့ပါ ….
ဂျစ်တူးလေးလို့ ကျွန်တော်တို့ စပြီးရင်းနှီးခဲ့တဲ့ညီလေး Kyaw Zin Win လူ့လောကကို စွန့်ခွာသွားပါပြီ။ သတ်သေသွား တာပါ။ အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ကွက်ချန်ပြီး Gay ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက် လုပ်ငန်းခွင် Viber Group ထဲမှာ သူ့ကိုဝိုင်းလှောင်ခဲ့တယ်။ သူ့လိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တောင် မိန်းမ တစ်ယောက်က […]